Israsaaseyn dhimasho sababtay oo ka dhacday gudaha suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdisho |
Israsaaseyn dhimasho sababtay oo ka dhacday gudaha suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdisho
Haweeney ayaa ku dhimatay qof kalena waa uu ku dhaawacmay ka dib markii barqanimadii maanta askar ka wada tirsan ciidamada dowlada ay isku rasaaseeyeen gudaha Suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdisho.
Goob joogayaal ayaa sheegaya in israsaaseyntaas ay bilaabatay markii ciidamo ka tirsan dowlada ay weerareen askar lacago canshuuro ah qaadayey oo ku sugnaa qeybta lagu iibiyo Dahabka ee Suuqa Bakaaraha.
“Israsaaseynta dhexmartay askarta mid kooban ayey aheyd, iyagana wax khasaare ah isuma geysan hase ahaatee waxaa ku dhimatay haweeney ka mid ah kuwa ganacsada dahabka, halka qof kalena uu ku dhaawacmay” sidaas waxaaa yiri goob jooge ka mid ah dadkii ku sugnaa Suuqa.
Xaalada goobta ay israsaaseyntu ka dhacday ee Suuqa Bakaaraha oo muddo kooban hakad gashay ayaa hadda caadi ku soo laabatay, iyadoo aysan war ku saabsan shaqaaqadaas oo ka soo baxay maamulka degmada Howlwadaag iyo saraakiisha amaanka ee Suuqaasi.
Israsaaseynta dhexmarta ciidamada dowlada oo ah wax joogto ka ah goobaha ay ka howlgaalaan ayaa saameyn ku yeelata shacabka ka ag dhow, iyadoo aysan jirin cid dib dambe iskugu soo hadal qaada khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee shacabka ka soo gaara.